Igbo, Romans, Lesson 021 -- The Privilege of the Jews does not Save them from the Anger (Romans 3:1-8) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 021 (The Privilege of the Jews does not Save them)
e) Ohere nke ndi Ju azoputaghi ha iwe ha (Ndi Rom 3:1-8)
NDI ROM 3:1-5
1 Olee uru onye Juu ahụ bara, ma ọ bụ, olee uru ibi úgwù bara? 2 Ẹsiwak ke kpukpru usụn̄! N’ihe banyere ha bụ okwu nke Chineke. 3 N’ihi na ọ bụrụ na ụfọdụ ekweghị? Ha ekweghi-ekwe me ka ikwesi-ntukwasi-obi nke Chineke ghara idi irè? 4 N'ezie ọ bụghị! N’ezie, ka Chineke bụrụ onye eziokwu mana onye ọ bụla bụ onye ụgha. Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si ka ewe gua gi n'onye ezi omume n'okwu gi, we merie gi mgbe ekpe gi ikpe. 5 Ma ọ buru na ajọ omume-ayi gosiputara ezi omume nke Chineke, gini ka ayi g’ako? Chineke bu onye na-ezighi ezi nke na-ewe oke iwe? Anamekwu dika madu.
Tupu Pọl edegara ọgbakọ dị na Rom akwụkwọ ozi, enwere ọtụtụ ajụjụ n'etiti ndị otu ya. Ndị kwere ekwe nke ndị Jentaịl ejighị ndị Juu dị ka nnukwu ihe ùgwù na nsọpụrụ. Ya mere, ha nwere obi uto mgbe Pol gwasiri, n’akwukwo ozi ya, na Iwu na ibi ugwu ga-ama ndi mmadu nke ogbugba ndu ochie ahu ikpe.
N’aka nke ozo, ndi kristain ndi Ju, ndi rubere Iwu ahu isi, na etinye okwu banyere ezi omume site n'okwukwe. Ihe ndị ahụ Pọl kwuru were ha iwe, ebe ọ na-emebi ihe ùgwù ha nwere n’iwu na ọgbụgba ndụ.
Pol ama ọfiọk mme edu emi ke isan̄ isụn̄utom esie, ndien enye ama ọbọrọ mme mbụme mmọ mbemiso ke leta oro enye ekewetde ọnọ ẹsọk mbon Rom. O weere ya na mmadụ gwara ya, sị: “Pọl kwuru eziokwu, ndị Juu abụghị anyị karịa.” Pọl ji ọnụ ọchị zaa ya, sị: “Nwanne m nwoke m hụrụ n'anya, i mejọrọ, n'ihi na ndị Juu ka nwere nnukwu ihe ùgwù. . Ọ bụghị agbụrụ ha, ma ọ bụ njirimara ha, ma ọ bụ mba ha, nke bụ naanị uzuzu na ntụ. Naanị otu ihe ha nwere bụ okwu Chineke nyere ha n'aka. Mkpughe nke a ga-anọgide na nganga na ọrụ ha ruo mgbe ebighi ebi.
Mgbe ahụ Pọl chere na onye ọzọ kwuru, sị: “Ma ha abụghị ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị na-edebe Iwu nke ọgbụgba ndụ ahụ.” Pọl zaghachikwara ebubo a siri ike, sị: “I nwere chere na njehie mmadụ na-eme ka nkwa na ikwesị ntụkwasị obi nke Onye-nwe ghara ịdị mma? tọgbọ chakoo? Chineke anaghị ala azụ, ọ naghịkwa agha ụgha. Okwu ya bụ eziokwu ebighi-ebi na ntọala nke elu-igwe. Amara nke Onye-nwe, n’ihu ekwesịghị ntụkwasị obi nke mmadụ, kwesịrị ntụkwasị obi ma na-adigide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ na Chineke mefuru ọgbụgba ndụ ochie ahụ maka mmehie nke ndị ya, agaraghị enwe ọgbụgba ndụ ọhụrụ anyị. N’ezie, anyị na ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ na-emehie karịa nke oge ochie, ma e jiri ya tụnyere nnukwu onyinye enyere anyị. Yabụ, anyị anaghị ewulite olile anya anyị maka ọdịda anyị dara ada ma ọ bụ ihe ịga nke ọma, kama ọ bụ naanị n’amara nke Chineke. Anyị na-ekweta na anyị bụ ndị ụgha na ndị ụgha dịka mmadụ niile, anyị na-agbakwa akaebe na naanị Chukwu bụ onye eziokwu na ntụkwasị obi. Ikwesị ntụkwasị obi ya na nkwa ya agaghị ada ada.
NDI ROM 3:6-8
6 N'ezie ọ bụghị! N'ihi na oleezi mgbe Chineke ga-ekpe ụwa ikpe? 7 N’ihi na ọbụrụ na eziokwu nke Chineke abawo ụba site n ’ụgha m ruo n’ebube Ya, gịnị kpatara a na-ekpekwa m ikpe dịka onye mmehie? 8 Gini mere ịsị, "Ka anyị mee ihe ọjọọ ka ihe ọma wee pụta"? - dika edeputara anyi n’agha na dika ufodi si kwuo na anyi n’ekwu. Amamikpe ha ziri ezi.
Dika Pol kwusiri olile anya ayi, nke ewukwasiri ya na ikwesi ntukwasiri obi nke Chineke, o nuru olu nke mmụọ ya na - eti mkpu werezi oku: “Olee otu Chineke g’esi gua onye ezi omume ma oburu na ekpughere ezi omume ya na amara ya? Ọ bụ na ọ bụghị ikpe na-ata Chineke ahụhụ na mmehie anyị na ekweghị ekwe mgbe ntaramahụhụ ụwa na nrụrụ aka nke ihe a kpọrọ mmadụ na-enye ohere maka ngosipụta nke ikwesị ntụkwasị obi ya dị ukwuu? Ekem, bịan̄a; ka anyị mee mmehie iji nye ya otuto! ”
Pol agbachighị nkịtị maka ebubo a siri ike, kama ọ kọwara ma mee ka o mie emi karịa site na mkpesa ndị ọzọ, wee kọwapụta na o tinyeghị ha dịka onyeozi, kama dịka mmadụ. O kwuru, sị: N’ezie, ọ bụrụ na e gosipụtara ikwesi ntụkwasị obi nke Chineke site n’ikpe na-ezighị ezi anyị, ọ ga-abụ ikpe na-ezighi ezi na Chineke ịbụ Onyeikpe nke ụwa; ọ bụrụkwa na ụgha anyị na-akwado eziokwu ya, ọ gaghị enwe ikike ịma ụwa ikpe. Mgbe ahụ, ọ ga-adị mma ka anyị mee mmehie iji gosipụta otuto nke ọma.
Pol ekwughi, na mkparịta ụka ọjọọ ndị a, nzaghachi nye ajụjụ mbụ ahụ, mana ọ kwusiri ike, dokwuo anya ma zụlite mmụọ ọjọọ ahụ na-ajụ ajụjụ, iwere arụmụka niile site n'aka ndị mmegide ya tupu oge eruo. O kwuputara azịza ya n'okwu abụọ: Nke mbụ, "Ezie, ọ bụghị!" Anabataghị m ya ọzọ ma ọlị, Chineke bụ onye akaebe m na anaghị m eche ụdị nkwulu ahụ n’obi m. Na nke abuo, o kwuru na ikpe nke Chineke ga-adakwasị ndị ekwulu ahụ, na ha enweghị ike ịgbanahụ iwe ya, n'ihi na Ọ ga-ebibi ha ozugbo. Site n'ụdị a ndịozi, anyị na-ahụ na anyị na ndị iro Kraist mgbe ụfọdụ erute ebe anyị ga-akwụsị arụmụka na ajụjụ niile nke anyị nwere ike anyị agaghị ekwujọ ya. Mgbe ahụ anyị ga-enwerịrị obi ike iji kwusi mkparịta ụka ahụ, ma tinye ndị ahụ kpamkpam n'ihu Chineke na ikpe ziri ezi ya dị ebube.
EKPERE: O Chineke di nso, gbaghara anyi uju anyi nile. Daalụ maka ndidi gị, n’ihi na ị dịghị ibibi anyị n’ihi ajọ omume anyị na amaghị anyị, kama ị kpọrọ anyị ka anyị were nụ okwu gị, wee za aza ịbịaru mmụọ nsọ gị. Wepu ajuju niile na-emegide imegide ịhụnanya gị, ma debekwa uche anyị. Onye-nwe, anyị achọghị ịbụ ụmụ nnupụisi. N’ihi ya, kuziere anyị ịdị umeala n’obi nke Ọkpara gị, jupụtakwa n’amamihe nke ndịozi gị ka anyị wee ghara ikwu okwu, na mkparịta ụka anyị na ndị ọzọ, n’uche nke mmadụ, kama chọọ nduzi gị n’ozi anyị niile.
Gini bu ajuju na-emegiderịta onwe ya na akwukwo ozi nke ndi Rom, oleekwa azịza ha?
Page last modified on January 25, 2021, at 03:49 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)